Xulka Talyaaniga oo dib ugu noqonaya shaxdii hore kaddib shaxdii la yaabka lahayd ee xalay! – Gool FM
Xulka Talyaaniga oo dib ugu noqonaya shaxdii hore kaddib shaxdii la yaabka lahayd ee xalay!
Raage November 13, 2016
(Milano) 13 Nof 2016 – Xulka Talyaaniga oo xalay ku badiyay shax ugub ah ayaa dib ugu laabanaya shaxdii uu sanadihii yaraa ee dambe uu ku socdey ee 3-5-2 taasoo ay kula ciyaarayaan xulka Jarmanka oo ay ciyaar saaxiibtinimo kula leeyihiin gegada San Siro, iyadoo uu safka hore kasoo muuqan karo Gianluigi Donnarumma.
Xulka Azzurri ayaa xalay 4-0 ku xaaqay Liechtenstein oo ay la ciyaarayeen kulan ka tirsan isbreebreebka KA2018, iyagoo weliba ku ciyaaraya shaxda 4-2-4 oo ah shax aan caadi ahayn oo weerar ah.
Yeelkeede, macallin Giampiero Ventura ayaa sheegay in waloow ay shaxdiisu tahay mid iminka uun bilow ah oo uu sii wadi doono aan misna laga yaabin inuu shaxdaa ku wajoho xulka Jarmanka oo ay kulan sxbtinimo la leeyihiin.
Xulka Talyaaniga ayaa maanta ku tababartay gegada kooxda AC Milan ee Milanello maaddaama ay San Siro ku ciyaarayaan, waxayna xulka La Nazionale ay ku aalamiintaynayeen 3-5-2 iyadoo ay safan karaan Matteo Darmian iyo Marco Parolo oo safka hore kusoo laaban kara.
Waxaana kulanka San Siro, lagu wadaa inuu booska 1-aad helo qabtaha da’da yar ee AC Milan ee 17-jirka ah ee Donnarumma oo la siin doono fursad uu isku muujiyo.
Xulka Jarmanka oo booqday goobo taariikhi ah oo Roma ku yaalla + Sawirro
TOOS u daawo: Belgium vs Estonia - LIVE (Shaxda sugan)